सभापतिको पक्षमा खुलेर लागिन सुजाता कोइराला ! भनिन् सभापतिलाई कमजोर पार्ने काम नगरौं – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ सभापतिको पक्षमा खुलेर लागिन सुजाता कोइराला ! भनिन् सभापतिलाई कमजोर पार्ने काम नगरौं
सभापतिको पक्षमा खुलेर लागिन सुजाता कोइराला ! भनिन् सभापतिलाई कमजोर पार्ने काम नगरौं
दीप संञ्चार असोज २२, २०७७ गते २१:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं — पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउमा खुलेरै लागेकी छन् । कोइरालाले रामचन्द्र पौडेल समूहको नाममा पार्टी सभापतिविरुद्ध दर्ता गराइएको विरोधपत्र कांग्रेस सिध्याउने खेल भएको आरोप समेत लगाएकी छन् ।
कोइरालाले प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा पौडेल समूहका नाममा विरोध पत्रमा आफुले असहमति छ भन्दाभन्दै हस्ताक्षर समावेश गराएको पनि बताइन। ‘जीवन परियारजी आएर ल हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भन्नुभयो। मैले गरे, तर एकघन्टाभित्रै मैले वहाँलाई फोन गरेर मेरो असहमति नै भनेकी हुँ,’ कोइरालाले भनिन्।
उनले कम्युनिस्ट सरकारसँग जुध्नु पर्ने वेलामा आफ्नै पार्टीभित्र विग्रह ल्याउनेगरी पौडेलले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको असहमतिपत्रप्रति कोइरालाले आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको बताएकी छन्।
‘शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी दुबै समूहमा राम्रा साथीहरु पनि छन्। दुबैलाई मिलायो भनेमात्र कांग्रेस बलियो हुन्छ,’ कोइरालाले भनिन्, ‘होटल र रेस्टुरेन्टमा बसेर सिक्नेचर गर्ने होइन ।